Nokia 3.4 gosipụtara Snapdragon 460 yana nnwere onwe ruo ụbọchị abụọ | Gam akporosis
Nokia ekwuputala mmalite nke ngwaọrụ ọhụrụ emere maka ahịa ndị na-apụta, na-abata India na izu ndị na-abịa. Nokia 3.4 bụ ama na-abanye larịị ama, na nkọwa ga - eme ka ịre ndị na - azụ ahịa na mba ahụ.
Nokia 3.4 kpebiri ịnọgide na-arụnye ndị nrụpụta sitere na onye nrụpụta Qualcomm nke na-enye ezigbo arụmọrụ dị ala na ogo dị ala. Ekwentị na-abịa na ntọala nke RAM na nchekwa, mana n'ihe banyere nke abụọ enwere ike gbanwee ya site na iji kaadi MicroSD.
1 Nokia 3.4, ọnụahịa emere ka ọ rụọ ọrụ ụbọchị niile
2 Batrị maka ụbọchị abụọ
Nokia 3.4, ọnụahịa emere ka ọ rụọ ọrụ ụbọchị niile
Ngwaọrụ ọhụrụ a nwere ihuenyo 6,39 nke anụ ọhịa IPS LCD ụdị na HD + mkpebi (1.400 x 720 pikselụ), abịa na-echebe site ozodimgba iko megide splashes na o kwere omume ọkọ. O nwere obere bezels, naanị na ala idowe aha onye nrụpụta.
El Nokia 3.4 na-akwụnye ihe nhazi Snapdragon 460, ọ bụ obere ihe oriri na Adreno 610 GPU, na mgbakwunye na ọ na-etinye 4 GB nke RAM. Nchekwa ahụ na-anọgide na ntọala 64 GB, mana ọ nwere ike ịgbasa ruo 512 GB na ụdị kaadị MicroSD, taa ha nọ na ọnụ ahịa akụ na ụba ma ọ dị mma maka ịchekwa ozi.
Nokia gụnyere ihe dị ka igwe foto atọ dị n’azụ, onye nke ozo bu megapixels 13, nke abuo bu megapixels 5 nke uzo di obosara na nke ato nke di 2 megapixels miri emi. Ihe mmetụta n'ihu na-enye ọtụtụ 8 megapixels, ọ dabara adaba maka ịwe foto dị mma na vidiyo na ogo dị elu.
Batrị maka ụbọchị abụọ
Nokia na ngwaahịa ngwaahịa kwere nkwa ihe dị ka ụbọchị abụọ na batrị 4.000 mAh, O zuru ezu karịa 30 awa na-aga n'ihu ojiji, ebe arụmọrụ sitere na CPU. Ihe niile na-enweta ekele eziokwu ahụ bụ na ekwentị ga-emefu obere mgbe ọ na-eji ya site n'inwe ike ịzọpụta software.
Nchaji nke 4.000 mAh ahụ ga-eme site na chaja bụ isi maka ndụ, ọdụ ụgbọ mmiri bụ Micro USB na ọ ga-ezuru iji kwụọ ya karịa otu awa. N'otu aka, anyị ga-azọpụta onwe anyị na-ebu otu ihe kwa ụbọchị site na inwe batrị zuru ezu iji kwado ojiji nke ozi ngwa, oku, ozi na ndị ọzọ.
Na njikọ ngalaba, ọ bịarutere nke ọma, ọ ga-ejikọ na netwọk 4G / LTEO nwere Bluetooth 5.0, Wi-Fi b / g / n, GPS ma ọ nweghị chaja Micro USB maka ịkwụ ụgwọ. Ihe mkpisi aka na-agụ dị n'azụ, ebe ọ nwere ọdịdị ihu ya site na igwefoto n'ihu.
Akụrụngwa ọ na-abịa bụ gam akporo 10, ihe kachasị mma bụ na ọ bụ nsụgharị dị ọcha, na ịnweta Storelọ Ahịa Play ma kwere nkwa imelite gam akporo 11 na ọnwa ndị na-abịanụ. Basic na-eweta ụfọdụ ngwa arụnyere maka India, na-enweghị ụfọdụ n'ihi na India kpebiri iji ụfọdụ ma ọ bụghị ndị ọzọ.
IKIRU 6.39-anụ ọhịa IPS LCD na HD + mkpebi (1.400 x 720 pikselụ) / ozodimgba iko
Kaadị grafik Adreno 610
Nchekwa n'ime 64 GB / O nwere oghere MicroSD ruo 512 GB
Gbanwee CAMERA 13 MP Isi ihe mmetụta / 5 MP Wide Angle Sensor / 2 MP Omimi mmetụta
UMUAKA 4.000 mAh na chaja MicroUSB
NDỊ ọzọ Rear akara mkpisiaka agụ / Face ude
Mbibi na ibu ibu Kwenye n'aka onye nrụpụta
El Nokia 3.4 buru ụzọ rute India maka ọnụahịa nke INR 11,999, ihe dị ka euro 135 iji gbanwee maka ihe nlereanya na-etu ọnụ inwe batrị nwa oge. Ọ bịarutere n'ụdị atọ dị iche iche na February 20, na aqua blue, na ojii na ezigbo odo odo. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịbeghị ụbọchị enyere maka mbata na mpaghara ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nokia 3.4 gosipụtara Snapdragon 460 yana nnwere onwe ụbọchị abụọ
Etu esi amata ma ngwa Barcode Scanner nke ị na-eji n’ekwentị gị enweghị malware